About Ukraine - Sumy National Agrarian University
Tonga soa eto amin'ny Sumy Agrarian National University
Tranom-bakoka ny scanty
fomba voarindra asa
Construction Civil Department
Agrotechnologies sy ny tontolo iainana Use Department
Fitsaboina momba ny biby Medicine Department
Toekarena sy Management Department
Post-nahazo diplaoma Education departemantan'i
Taratasy avy amin 'Education Department
fieken-keloka fepetra takiana
Tongasoa eto Ukraine
Nahoana no mianatra any Ukraine
mpianatra zavatra ilaina
Visa & Fifindrà-monina
Okraina dia firenena any Eoropa Atsinanana. Ukraine manamorona an'i Belarosia ny avaratra andrefana , Federasiona Rosiana ho any atsinanana sy avaratra, Polonina, Slovakia sy Hongria ny andrefana, Romania sy Moldavia ny atsimo andrefana. Atsimon'i Ukraine dia voasasa ny Ranomasina mainty ary Ranomasin'i Azov.
Territory an'i Ukraine dia 603,628 km², manao izany ny firenena lehibe indrindra ao amin'ny kaontinanta Eoropeana. Ny avo indrindra any Okraina dia Mt. Hoverla ao amin'ny Carpathians, miaraka amin'ny isam-ponina ny 2061 M (about 6762 Ft).
Aogositra 24, 1991 Okrainiana antenimiera nandany ny lalàna ny Fahaleovantena izay nanambara ny parlemanta Ukraine ho toy ny tsy miankina fanjakana demokratika. Ukraine dia unitary-panjakana ahitana ny 24 faritany, iray mizaka tena repoblika (Crimea).
Ukraine manana hery anaty Mitana ara-toekarena. Ny manan-danja sehatry ny toe-karena dia orinasa. Izany mahatonga ny lehibe indrindra amin'ny firenena anisan'ny fidiram-bola. Fambolena dia zava-dehibe ihany koa.
Fiaraha-miasa miaraka amin'ny fikambanana ara-bola iraisam-pirenena, Tahirim-bola iraisam-pirenena (IMF), Iraisam-pirenena sy ny Eoropeanina banky ny fanorenana indray sy ny fampandrosoana (IBRD sy EBRD) Manampy mba hampidirana ny fandaharana ny ara-bola sy hisarika ny tombontsoa stabilization bola fitaovana ho amin'ny toe-karena ny firenena.
Ukraine ny ankamaroany dia manana mahonon-tena Continental toetrandro. Precipitation dia disproportionately zaraina; izany no avo indrindra any andrefana sy avaratra ary ambany indrindra ao amin'ny atsinanana sy atsimo-atsinanana. Western Ukraine mandray manodidina 1,200 millimeters (47.2 in) ny Precipitation isan-taona, raha Crimea mandray manodidina 400 millimeters (15.7 in). Miovaova arakaraka ny ririnina mangatsiaka manamorona ny Ranomasina Mainty ny mangatsiaka lavitra kokoa any afovoan-tany. Ny eo ho eo ny maripana ririnina dia avy -8˚C ny -12˚C (avy + 17.6˚F ho + 3˚F). Faritra tany amin'ny faritra atsimon'i hafanan'ny ririnina dia tokony ho 0˚C (+320F). Ny eo ho eo fahavaratra mari-pana: avy + 18˚C ho + 25˚C (avy + 64.4˚F ho + 77˚F) fa mandritra ny antoandro mety hahatratra + 35˚C (+95F).
ny sokajy mponina an'i Ukraine dia tombanana amin'ny 45,426,200 tamin'ny Janoary 2014. Ny tanàna lehibe indrindra any Okraina dia Kyiv (Renivohitra Okraina). Ukraine no mponina ny solontenan'ny 128 firenena, zom-pirenena, ary ny foko.
ny fanjakana teny Okraina no Okrainiana. Rosiana, izay ny mitàna ny toeran'ny fiteny ofisialy ny Firaisana Sovietika, dia be miteny, indrindra fa eo amin'ny atsinanana sy atsimon'i Ukraine. Misy vondrona sasany miteny Crimean-Tatar, Malagasy Romanian, poloney, Hongroà sy ny fiteny hafa.
fivavahana: Ny mpino an'i maro fivavahana. Ortodoksa sy Katolika Grika (Okrainiana Katolika ny Byzance fombam-pivavahana) no lehibe indrindra.
Hryvna dia pirenena vola an'i Ukraine. Izany no vola ny firenena nanomboka tamin'ny Septambra 2, 1996.
Modern Ukraine kolontsaina Manana be dia be mitovy amin'ny Rosiana sy ny kolontsaina belarosiana. Tsy dia tena mahagaga tahaka ny firenena rehetra, telo manana ny fakany sy ny fiaviana ara-tantara avy amin'ny Kievan RUS, fa nandritra ny taonjato faha-13 dia nanomboka-dalam-pandrosoana tahaka ny firenena tsirairay izy ireo ankehitriny. Tantara maneho fa firenena rehetra mitady hamorona angano sy ny hafa momba ny ara-tantara taloha. Fisehoan-javatra ara-tantara dia matetika adika amin 'ny fomba ny olona ta-hahita azy ireo, fa izany akory tsy midika hoe izao no lalana ny tena zava-nitranga.
Over 500 tanàna any Ukraine dia nanorina mihoatra noho 900 taona maro lasa izay, koa 4,500 tanàna any Ukraine dia be noho 300 taona.
Maherin'ny 150-arivo tsangambato ny kolontsaina, tantara, ary ny arkeolojia hita taratra ny miavaka tantaran 'ny vahoaka Okrainiana. 80 % ny tsangambato ny Kyivan RUS fepetra lehibe (IX - XII taonjato) dia mifantoka ao amin'ny faritanin'i Ukraine.
Ny fihadian-tany ny tanàna fahiny in tira, Olvida, Chersonese, Panticapea mampiaraka avy tamin'ny taonjato faha-5 B.C. ary koa ny tanàna mimanda ny asa lehibe izay naorina tamin'ny taonjato faha-14-faha-15 ny Italianina avy any Genoa, dia hita in Crimea.
Mihoatra ny 600 tranombakoka hampahafantatra ny tena zava-misy sy toetra miavaka ny Okrainiana tantara sy ny kolontsaina.
Ukraine manana tsara sy maro karazana jeografia, toetrandro, ary Toerana mahafinaritra toetra. Ukraine fizahantany mpandraharaha mihevitra ny Ranomasina Mainty sy ny Crimea ho toerana tsara ho an'ny Mountaineering, tendrombohitra bisikileta, vato fiakarana sy ny antsitrika. Amin'ny Tendrombohitra Carpates no nentim-paharazana toerana ho tia manao ski ambony, Mountaineering sy ny kayak.
Maro ny faritra Okraina no namonjy ny foko originality. Mpizaha tany koa manana fahafahana lehibe no hivory hiaraka pirenena kolontsaina, hira, dihy, sy ny sakafo.
Tahaka Izany no Sumy Agrarian National University? Hizara azy :
Fieken-keloka in skimpy
Tonga soa eto amin'ny tranonkalan'ny Sumy Agrarian National University. Azoko antoka fa ho hitanao ao mahaliana be dia be momba ny asa ny universityning ny teny vahiny sy ny informatika.
Sumy NATIONAL AGRARIAN ONIVERSITEN'I
#160, Kirova p., Sumy, 40021, Ukraine
© 2016 Sumy National Agrarian University - Biraon'ny fieken-keloka ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena